The Lego Movie (2014) – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
PG 2014 100 min Animation
IMDB: 7.8/10 304,932 votes
Cara McCastlain Fisher, Christopher Miller, D. Edwardz, Egbert Tjong, Eoin Murphy, Gareth Cowen, Gareth Young, Hailey White, Heidy Villafane, Kelly Lafferty, Lachlan Phillips, Laurence Andrews, Lori Grabowski, Ned Walker, Omar Dabbagh, Pablo Calvillo, Phil Lord, Steve Day, Tim Gaul, Vernessa Cook
Alison Brie, Channing Tatum, Charlie Day, Chris Pratt, Elizabeth Banks, Liam Neeson, Morgan Freeman, Nick Offerman, Will Arnett, Will Ferrell
Nominated for 1 Oscar. Another 73 wins & 61 nominations.
သာမန်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်သားလေး အန်းမက်ဟာပုံမှန်သမားရိုးကျအတိုင်းနေထိုင်တတ်သူဖြစ်ပြီးညွှန်ကြားချက်တွေ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုအတိအကျလိုက်နာတတ်သူ စာအုပ်ကြီးသမားဖြစ်ပါတယ်…တစ်နေ့မှာတော့ သူဟာ ကမ္ဘာကြီးကိုကယ်တင်ပေးနိုင်မယ့် ပစ္စည်းအပိုင်းအစတစ်ခုကိုမတော်တဆရှာဖွေတွေ့ရှိမိရာမှ ဒဏ္ဍာရီလာသူရဲကောင်းအဖြစ်မှားယွင်းယုံကြည်ခြင်းခံရပါတော့တယ်…ဒါပေမယ့်သူဟာ ဘာကိုမှမတီထွင်တတ်သူဖြစ်တဲ့အတွက်သူဦးဆောင်ရမယ့်သူရဲကောင်းအမျိုးမျိုး Batman,Superman တို့ကြားမှာ အခက်အခဲတွေကြုံတွေ့လာရပါတယ်…အဲ့ဒီလိုအခြေအနေကြားထဲမှ အန်းမက်ဟာ ဘယ်နည်းဘယ်ပုံနဲ့ အားလုံးကိုဦးဆောင်နိုင်မယ်ဆိုတာတွေကမ္ဘာကြီးကိုကယ်တင်နိုင်မယ်ဆိုတာတွေကို စိတ်ဝင်တစားနဲ့ကြည့်ရှုရမှာပါ…ချစ်စရာAnimationတွေ နဲ့ဒီmovieလေးဟာ ကိုယ်တွေရဲ့နေ့စဉ်လူနေမှုဘဝကိုထင်ဟပ်နေပြီးလူတိုင်းဟာ အသီးသီးထူးခြားကြပြီးသူရဲကောင်းတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းမီးမောင်းထိုးပြထားပါတယ်…
Cara McCastlain Fisher Christopher Miller D. Edwardz Egbert Tjong Eoin Murphy Gareth Cowen Gareth Young Hailey White Heidy Villafane Kelly Lafferty Lachlan Phillips Laurence Andrews Lori Grabowski Ned Walker Omar Dabbagh Pablo Calvillo Phil Lord Steve Day Tim Gaul Vernessa Cook
Alison Brie Channing Tatum Charlie Day Chris Pratt Elizabeth Banks Liam Neeson Morgan Freeman Nick Offerman Will Arnett Will Ferrell
Alison Brie Amanda Farinos Anthony Daniels Billy Dee Williams Channing Tatum Charlie Day Chris McKay Chris Paluszek Chris Pratt Chris Romano Christopher Miller Cobie Smulders Craig Berry Dave Franco David Burrows Doug Nicholas Elizabeth Banks Graham Miller Jadon Sand Jake Johnson Jonah Hill Jorma Taccone Keegan-Michael Key Keith Ferguson Kelly Lafferty Leiki Veskimets Liam Neeson Melissa Sturm Morgan Freeman Nick Offerman Shaquille O'Neal Todd Hansen Will Arnett Will Ferrell Will Forte
Option 1 mfile.cloud 472 MB SD (480p)
Option2storage.msubmovie.com 472 MB SD (480p)
Option3drive.google.com 472 MB SD (480p)
Option4drive.google.com 472 MB SD (480p)
Option5mfile.cloud 1.1 GB HD
Option6storage.msubmovie.com 1.1 GB HD
Option7drive.google.com 1.1 GB HD
Option 8 drive.google.com 1.1 GB HD
Option9mfile.cloud 2.8 GB FHD DTS 5.1
Option 10 storage.msubmovie.com 2.8 GB FHD DTS 5.1
Option 11 drive.google.com 2.8 GB FHD DTS 5.1
Option 12 drive.google.com 2.8 GB FHD DTS 5.1